ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 07/10/12
ဒု သမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မှန်သမျှ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အတည်ပြုချက် လိုပါတယ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters )
မနက်ဖြန် ကျင်းပမယ့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ လစ်လပ်သွားတဲ့ ဒု သမ္မတ နေရာအတွက် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အမည် စာရင်းတင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ထင်ကြေးပေးမှုတွေ တိုးလာနေပါတယ်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းက ရာထူးအတွက် တပ်မတော်သားအရာရှိကိုသာလျှင် ပေးအပ်မယ်လို့ သိရှိထားတာကြောင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဉာဏ်ထွန်း ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဉာဏ်ထွန်း ဟာ အငြိမ်းစားယူဖို့နီးကပ်နေပြီး တပ်မတော်ရဲ့ အစဉ်အလာအရလည်း ဒု သမ္မတ ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံများရှိ နေကြောင်း ဦးအောင်သောင်း က ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် စီးပွားရေး သတင်းအေဂျင်စီ Bloomberg က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောလှထွန်းကို ကိုးကားပြီး ကြည်း ရေ လေ ညှိ နှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနဲ့ ဒု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းတို့ နာမည်တွေ ရှေ့ကပြေးနေတယ်လို့ လည်း သတင်းပို့ ထားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးတို့ကို လျာထားတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်လို့ ပြောသံတွေလည်း ကြားရပါတယ်။ ကနဦး ထင်ကြေးပေးခံရသူတွေထဲမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို တို့ပါ ပါပါတယ်။
တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝေလင်း ကတော့ နာမည်စာရင်းအတည်ပြုဖို့ လတ်တလော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တိုင်ပင်နေဆဲဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မှ သေချာအဖြေပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မှန်သမျှ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အတည်ပြုချက်လိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ချင်းတော့ ညှိပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်(ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်) နဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမယ်။ အားလုံး တိုင်ပင်နေပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှ အတိအကျ အဖြေထွက်မှာပါ”လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝေလင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ယနေ့မှစပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို တက်ရောက်လာတဲ့ အတိုက်အခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒု သမ္မတသစ်ဟာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဆောင်ရွက်မယ့်သူ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ သတင်းထောက်တွေကို မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
ဒု သမ္မတသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဦးတည်မယ့် ဥပဒေအသစ်များကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်း မှာလည်း ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူတွေရဲ့ သြဇာအာဏာကို လျှော့ချရေး ရှေ့ပြေးလို့ လွှတ်တော် သတင်းရပ်ကွက်တွေက ဆိုပါတယ်။
လာမယ့် ရက်တွေ အတွင်းမှာလည်း အစိုးရ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၀န်ကြီးလေးဦးမှ ငါးဦး အထိ အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် အရွှေ့အပြောင်း လုပ်မယ်လို့ ဦးအောင်သောင်းက ပြောပါတယ်။ “အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ ပြောင်းမယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။ ပြောင်းမှာ။ ဘယ်သူတွေတော့ မသိသေးဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ လေး၊ ငါးဦး ပါမယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရနိုင်တယ်လို့ သတင်းပြေးနေသူတွေထဲမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း တို့က ရှေ့ဆုံးလို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:16 PM No comments:
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံတခုမှာ အတူတူတွေ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့် (ဓာတ်ပုံ – AP)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးသော ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ မူဝါဒချမှတ်ပြီး မည်သည့်ဗျူဟာအဆင့်ဆင့်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အမျိုးသားပညာရေးစနစ်ကို ထူထောင်သွားမည်ဟူသော ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ နည်းပါးနေသေးသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူများ ရုပ်သိမ်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်နည်းတူ ယင်းရေစီးကြောင်းတွင် လူငယ်များ ပါဝင်နိုင်ရေးနှင့် ရေရှည်ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယခု ပြန်လည်ကျင်းပနေသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းက ပညာရေးစနစ်မူဝါဒကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းရန် ရှိနေသည့် တချိန်တည်းတွင် မြန်မာပြည်ပညာရေးကို အမြန်ပြန်လည် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး ပညာရှင်များက လိုလားနေကြသည်။
မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ဒေါက်တာ ဦးမြင့်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားခဲ့ပြီး အာရှတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် အကောင်းဆုံးနှင့် အကြီးကျယ်ဆုံး တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ဧရာဝတီမြစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး အမျိုးသားအမွေအနှစ်နှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်အတွက် အရေးပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ဧရာဝတီလိုပါပဲ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ သူ့ရဲ့ အရင်က ရှိခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ရောင်နဲ့ အသွေးရောင်စုံ တော်တော်များများ ပြယ်လွင့်ခဲ့ရသည်” ဟု ဦးမြင့်က ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များကို လုံခြုံရေးအမြင်နှင့် ထိန်းချုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် အနှစ်သာရ ပျောက်ဆုံးနေရကြောင်း အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ လက်ခံစဉ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
တံခါးပိတ်ထားဆဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
“ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်း မရှိကြပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေ စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးနဲ့ ထိန်းထားချင်တဲ့ အတွက် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေဟာ မပီပြင် ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကျောင်းသားဆိုတာမျိုးက ဒီလို ထိန်းချုပ်ထားလို့ မရပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဟူသည်၊ ကျောင်းဟူသည် လူငယ်များအတွက် သူတို့ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာတွေအဖြစ် ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ စိတ်ကူးတွေနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ဖန်တီးခွင့် ရသင့်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀များမှာမူ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့နေကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်အီလီနွိုက် တက္ကသိုလ်မှ Intellectual Property Protection (IPR-2001) ကို တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပညာရေးကဏ္ဍများ၌ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေသည့် ဒေါက်တာ ကျော်ဇောနိုင်ကလည်း မြန်မာ့ပညာရေး နိမ့်ကျမှုမှာ ကျောင်းသားများ၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ကန့်သတ်ထားသလို ဖြစ်နေသည့် အလွတ်ကျက်ခိုင်းပြီး ပြန်ရေးခိုင်းသောစနစ်အား ယနေ့အထိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။
“ဒါကို ကျောင်းသားရော ဆရာရောက သဘောကျနေတယ်။ အလားတူ မိဘကလည်း အမှတ်များ ပြီးရောပဲ။ ဒီခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဆရာ၊ မိဘ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပြောင်းပစ်ရမယ်။ မပြောင်းရင် ပညာရေး တိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူး” ဟု ဒေါက်တာကျော်ဇောနိုင်က ပြောသည်။
အစိုးရအဆက်ဆက် ထိုသို့ ခေတ်မီသည့်ပညာရေး အယူအဆအပေါ် အခြေခံပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် မလုပ်ဘဲ အပေါ်ယံကျသည့် အပြောင်းအလဲကို စနစ်မမှန်ဘဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းများကြောင့် ကျောင်းပညာရေး ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရကြောင်းလည်း ၎င်းဆိုသည်။
ဒေါက်တာ ကျော်ဇောနိုင်က ဆက်လက်ပြီး “ဆရာတွေကလည်း ကျောင်းသားတွေကို Critical Thinking ရော၊ Creative Thinking ရော မပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့မှာလည်း မရှိဘူး။ နောက် သင်ရိုးညွန်းတမ်းဆိုတာ အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေတယ်။ အခုတော့ တနှစ်လည်းဒါပဲ၊ နောက်တနှစ်လည်း ဒါပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါ ပညာရေးမူဝါဒ အပြောင်းအလဲမြန်မှုရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဆရာဗဟိုပြု သင်ကြားမှုစနစ်ကနေ ကျောင်းသားဗဟိုပြု မပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေမှာ ဝေဖန်ပိုင်းခြား တီထွင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် မရှိတော့ဘူး၊ နောက် တက္ကသိုလ်တွေဟာ လွတ်လပ်မှုမရှိဘဲ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာ ရှိနေမှု၊ သင်ရိုးညွန်းတမ်းကို အမြဲတမ်း ခေတ်နဲ့အညီ ဆီလျော်အောင် မပြုပြင်နိုင်မှုတော့ကြောင့် ဖြစ်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
“နောက်တခုက ပြည်သူနီတိ မသင်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ပညာရေးအတွေးအခေါ် ပျက်သွားတော့ ဒါကို သင်ကိုသင်ရမယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း စာကြည့်တိုက် သုံးတတ်ဖို့ သင်ရမယ်။ အခုပညာရေး အခြေအနေက ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် နိမ့်ကျရုံတင်မကဘူး ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပညာရေး ရှိပါသေးရဲ့လားလို့တောင် မေးခွန်းထုတ်ရမယ့် အခြေအနေပဲ” ဟုလည်း ဒေါက်တာ ကျော်ဇောနိုင်က ပြောသည်။
ပညာရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများ ရေးသားပြုစုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီက အားလုံးအတွက် ပညာရေးနှင့် တိုင်းပြုပြည်ပြုဆောင်းပါးများ ဆိုသည့် ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ အငြိမ်းစား ဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ခင်ကလည်း “ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက်ပေးရရင် (၁) ညံ့တယ်၊ (၂) ညံ့တယ်၊ (၃) ညံ့တယ်။ ဘာကြောင့်ညံ့လည်းဆိုတော့ ပိတ်ထားလို့။ ပညာရေးစနစ်ကို မညံ့ချင်ရင် မူလတန်းကစပြီး ပြင်ရမယ်။ ပြင်ဖို့ကောင်းတာ ၂ ပိုင်းရှိတယ်။ အမြစ်ကလှန်ပြီး ပြင်ရလိမ့်မယ်။ တို့ကနန်း၊ ဆိတ်ကနန်း လုပ်လို့မရဘူး” ဟု ဆိုသည်။
အငြိမ်းစား ဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ခင် (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ)
ယခု ဧရာဝတီက အင်တာဗျူး ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်း ရွှေဂုံတိုင်ရှိ SSC အထူးကုဆေးရုံကြီး၌ ဆီးချိုရောဂါကို တက်ရောက်ကုသနေရသော ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင်မြင့်ခင်က “ကျမအလိုအရ ဖြေရရင် အမြစ်ကလှန်ပြီး အကုန်ပြင်ရမယ်။ အခုဟာကတော့ ဒီလိုမေးမယ်၊ ဒီလိုကျက်၊ ဒီလိုဖြေ၊ ဒီလိုအောင် ဖြစ်နေတယ်၊ နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်တာကို ပယ်ဖျက်ရမယ်၊ သင်ကြားပုံနဲ့ သင်ယူပုံနည်းနာကို ပြင်ရမယ်။ သင်တန်းအခန်းထဲမှာ ဆရာကရွတ် သူကပြန်ဆို စနစ်ကိုပြင်ရမယ်။ နောက် စာမေးပွဲစစ်တဲ့ပုံစံကို ပြင်ရမယ်။ အဲဒီလိုသာပြင်ရင် တော်ရုံအဆင့်တခုကို မြှင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည့် အပြင် ပညာရေးအသုံးစရိတ် ပိုသုံးရန်လည်း တိုက်တွန်းသွားသည်။
သမိုင်းသုတေသနဌာနတွင် သုတေသနမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အသက် ၉၀ အရွယ် ဒေါ်ကြန် မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်) ကလည်း “ပညာရေးကျဆင်းတယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်” ဟု ဝေဖန်ထောက်ပြကာ “ကျမတို့ ဟိုတုန်းက ကျွန်ပညာသင်ရပေမယ့် အခုကလေးတွေကိုတော့ နိမ့်တယ်လို့မြင်တယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ အခုခေတ်လို ကျူရှင်တွေဘာတွေ မရှိဘူး၊ ဒီလိုပဲသင်ရတာ။ တတ်စရာရှိရင် အခုခေတ်ကလေးတွေက ပိုတတ်ရမယ်၊ တခုခုမှားလို့ပဲ။ ပြုပြင်ရမယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:04 PM No comments:
ဆန္ဒပြခွင့် နည်းဥပဒေ ထွက်ပြီ
Tuesday, July 10, 2012 အိမ့်သံစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေပြီ။ လွှတ်တော်တွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေပြဌာန်းလိုက်ပါပြီလို့ ဆိုခဲ့ပေးမယ့် နည်းဥပဒေ မရှိသေးလို့ ဆန္ဒပြခွင့် မရခဲ့တာ အခုတော့ ဆန္ဒပြခွင့် ရဖို့ နည်းဥပဒေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
ယခင်က ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေအရ ဆန္ဒပြလိုကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပြည်ထဲရေး ဌာနကို အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထား ခဲ့ကြပေမယ့် နည်းဥပဒေ မရှိသေးလို့ ဆန္ဒပြခွင့်တွေ မရခဲ့ကြပါဘူး။
ထူးခြားတာက ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုရဲ့ လက်မှတ်နဲ့တကွ ဒီနည်းဥပဒေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက ပြီးစီးခဲ့ပေမယ့် ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ကျမှ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေ က ဖော်ပြ လာတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က သမိုင်းဝင် ဆဲဗင်း ဇူလိုင်နေ့ပြီးမှ အခုလို ပြည်သူကို အသိပေးလိုက် တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေး ဌာနကိုတော့ နည်းဥပဒေ ပြီးကတည်းက ဖြန့်ဝေပြိးသားဖြစ်ပြီး အခု ပြန်လည်ကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လည်း ဝေပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး နဲ့အတူ မရိုးသားတဲ့ လက္ခဏာတွေ မြင်နေရသေးတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ဘာပဲ ပြောပြော အခုတော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့်ရပါပြီ။ နည်းဥပဒေအရ အခန်း ၄ ခန်းပါဝင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဆီကို ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံတာ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ချပေးတာ၊ ငြင်းပယ်တာ၊ အယူခံဝင်တာဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:31 AM No comments:
ဒီဆိုင်းပုဒ်အရ ဆိုရင် နေပြည်တော်ဟာ ဖော်ရွေသဘောကောင်းပုံ ရတဲ့ မြို့တော်ကြီး ဖြစ်ပါတယ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
လွှတ်တော်တက်ဖို့ နေပြည်တော် ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိုင်မယ့် အိမ်က ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ထဲက တဧကကျော် ကျယ်ဝန်းတဲ့ နှင်းဆီစံအိမ် ခြံဝန်းထဲမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခြံအတွင်း လုံးချင်းတိုက် ၁၂ လုံး ရှိတဲ့ထဲက ကိုယ်ရေးအရာရှိများ၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အဖွဲ့ နေထိုင်ဖို့ ၃ လုံး ယူထားပါတယ် တဲ့။
ငှားရမ်းခနှုန်းထားကတော့ ကျပ် ၁၅ သိန်းဖြစ်တယ်၊ ဒီအိမ်တွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ Common Purpose ကုမ္ပဏီက မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်မာလာဝင်းဆီ လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်မာလာဝင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ရန်ကုန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပညာရေးရံပုံငွေပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ စုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တီရှပ်ကို ၁၂၅ သိန်းနဲ့ လေလံဆွဲ ၀ယ်ယူခဲ့သူပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေပြည်တော်လိပ်စာက နှင်းဆီစံအိမ်၊ အမှတ် ၆၃၃၂၊ လွိုင်ကော်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အေးဆေးငြိမ်သက်ပြီး လုံးချင်း အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများသာရှိတဲ့ လွိုင်ကော်လမ်းရဲ့ လက်ရှိ လုံခြုံရေးအခြေအနေကတော့ အလွန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်၊ လမ်းထိပ်မှာ ရဲ၊ စရဖ၊ အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အမြဲတမ်း ရှိတယ်၊ ဒါ့အပြင် မြို့ခံ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အစီအစဉ်တွေ ရှိထားပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံးအကြိမ် လွှတ်တော်တက်ရောက်တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေဖို့ နေပြည်တော်မှာ အိမ်လိုက်ရှာနေတာကြာပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်လည်း အာဏာပိုင်တချို့ က ဖိအားပေးနှောက်ယှက်တဲ့အတွက် ချောချောမွေ့မွေ့ ငှားရမ်းလို့ မရခဲ့ဘူး လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:06 AM No comments:
အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲ
ဟိုးတလောထဲက အသံတွေ ထွက်နေတဲ့ အစိုးရ ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အခုတော့ စတင်ပါပြီ။ ဒုဝန်ကြီး အသစ်များနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စတင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ဒုတိယ၀န်ကြီးများ ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးခြင်း
(၁) ဦးသန့်ရှင်း ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)
(၂) ဦးချန်မောင် ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၃) ဦးဝင်းရှိန် ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
(၄) ဦးဟန်စိန် ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၅) ဦးဝင်းသန်း ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန
(၆) ဒေါက်တာမျိုးမြင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
နောက်ထပ် ဘယ်ဝန်ကြီးတွေ ဆက်ပြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါအုံးမယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:02 AM No comments:
ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် (၁) မှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးပိုင် Good Family အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက အလုပ်သမား (၂၀၀) ခန့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
စက်ရုံတွင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းလင်းအောင်
ကို အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး အခုလို ဆန္ဒပြကြတာ
ဖြစ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မကြည်ကြည်ခင်က ပြောပါတယ်။
"ဒီထုတ်ပယ်မှုကို သမီးတို့ အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ လက်မခံနိုင်ပါဘူး
ဆိုတာက သမီးတို့ရဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတဲ့
အတွက်ကိုလည်း အလုပ်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအစိုးရကိုလည်း မလေးစား
သလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း မလေးစားသလို
မျိုးဖြစ်တယ်။ ဥပဒေကိုလည်း မလိုက်နာသလိုမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် သမီးတို့က သူတို့ရဲ့ ထုတ်ပယ်မှုကို ငြင်းပယ်ပါတယ်"
အလုပ်သမား အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခတစ်ခုကို အလုပ်သမား
ခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းလင်းအောင်က ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်က နားလည်မှုလွဲပြီး ကိုထွန်းလင်းအောင်ကို အလုပ်
ထုတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ စက်ရုံနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အခုလို ကိုထွန်းလင်းအောင်ကို ရုတ်တရက် အလုပ်ထုတ်လိုက်တာဟာ အလုပ်ရှင်ဘက်က အလုပ်သမား ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ
အဖွဲ့မှ မမာမာဦးက ပြောပါတယ်။
ညနေပိုင်းမှာတော့ အလုပ်သမားတွေဘက်က တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းလင်းအောင်ကို အလုပ်ပြန်လည် ခန့်အပ်ရေးကို အလုပ်ရှင်ဘက်က လိုက်လျောပေးတာကြောင့် နှစ်ဖက်ပြေလည်မှု ရရှိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ- RFA - ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်က ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် (၁) ရှိ good family အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြနေစဉ်။)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:57 AM No comments:
ဒေါ်စု ၏7July အနှစ်(၅၀)အခမ်းအနား မ်ိန့် ခွန်း
ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ၇-၇-၈၉ နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း ......
အမှန်တရားအပေါ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည် ခိုင်မာနေတာဟာ ၂၃ နှစ်ကြာပေမယ့်လည်း မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေတာကို သတိပြုနိုင်ရင် အတိုင်းအတာတခုအထိ ရဲရဲဝန့်ဝန့် အသိအမှတ် ပြုသင့်ပါတယ်။
ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ၇-၇-၈၉ နေ့တွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
* * * ကျမတို့ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ဟာ သမဂ္ဂ ပြိုကွဲတဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား လူငယ်များ ကျဆုံးတဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ဟာ ပညာရေးနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စများ၊ ပညာရေး ကိစ္စများ ပြောတဲ့အခါ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လေ့လာတဲ့ အခါမှာ အခုပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ကြည့်ရမယ်။ ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြိုခွဲ သွားသလဲဆိုတာ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်ရမှာပဲ။ ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖြိုခွဲသွားသလဲဆိုတာ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားများကို ပစ်သတ်ခြင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဖြိုခွဲခြင်းမဖြစ်ခင်မှာ ကျောင်းသားများဟာ အဲ့ဒီတုန်းက စစ်အာဏာပိုင်များနဲ့ ဆွေးနွေးပါ၊ ညှိနှိုင်းပါဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါကိုလည်း ငြင်းခဲ့တယ်။ ဒီစစ်အာဏာပိုင်များဟာ ကျောင်းသားများနဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအရေးကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ Aid to Civil Power လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာဘဲ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်း၊ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တဲ့နည်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ Aid to civil Power ဆိုတဲ့ တပ်မတော် တခုအနေနဲ့ ထိန်းသင့်ထိန်းထိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို မထိန်းခဲ့တာကတော့ ဦးနေဝင်းပဲ။ အဲ့ဒီဟာကို အားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ်။
ကျမ ဒီလိုပြောနေရခြင်းအကြောင်းဟာ ဦးနေဝင်းကို သက်သက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ အခု ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေလို့ပါ။ တနေ့တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဟာ မိန့်ခွန်းပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာ Aid to Civil Power ဆိုတာ သူအယုံအကြည်မရှိဘူး ဆိုတာကိုလည်း ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဒီသဘောထားတွေဟာ ဦးနေဝင်း သဘောထားတွေနဲ့ တထပ်ထဲပါပဲ။ ဦးနေဝင်းရဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ တထပ်ထဲမို့လို့ အခုထိတိုင်အောင် ဦးနေဝင်းရဲ့ ဩဇာအာဏာဟာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ထင်ရှားပါတယ်။
ကျမတို့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မရင်ဆိုင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမ ဒီကိစ္စတွေကို ဖော်ပြတာပါ။ အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဟာ ဘယ်လိုပဲ ဦးနေဝင်းဟာ အငြိမ်းစားသွားပြီလို့ပြောပြော၊ ဦးနေဝင်းလုပ်တဲ့အတိုင်း ဆက်ပြီး လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဦးနေဝင်းရဲ့ အာဏာအောက်မှာ ရှိတယ်လို့ပဲ ကျမတို့ သတ်မှတ်ရမှာပဲ။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်များကို လက်နက်နည်းနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ချေမှုန်းဦးမယ်၊ ထိခိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ ရှိရင်တော့လည်း ဦးနေဝင်းရဲ့ အမိန့်အရ လုပ်တယ်လို့ပဲ ကျမတို့ သတ်မှတ်ရမှာပဲ။ ဒီတော့ နဝတ အစိုးရ အနေနဲ့ တကယ်ပဲ ဦးနေဝင်းရဲ့ ဩဇာအဏာ အောက်ကနေပြီးတော့ လွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာ ပြချင်လို့ရှိရင် ဦးနေဝင်းနည်းတွေကို ဆက်ပြီးတော့ မသုံးပါနဲ့တော့။ သမဂ္ဂကို ဖြိုခွဲတဲ့ ဦးနေဝင်း၊ ကျောင်းသားများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ နည်းတွေကို လုံးလုံးဆက်ပြီးတော့ မသုံးပါနဲ့တော့ ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ ဒီကနေ့ ဆက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုရမှာပဲ။
ဒါနိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး တိုင်ပင်တဲ့နည်းပါ။ အရင်တုန်းက နိုင်ငံခြားကိုလိုနီအစိုးရများတောင်မှ ဒီနည်းကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့အချင်းချင်း ဒီနည်းကို ပိုပြီးတော့ သုံးသင့်ပါတယ်။ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းရမယ်၊ ဆွေးနွေးရမယ်၊ တိုင်ပင်ရမယ်။ အများကောင်းကျိုးအတွက် ဆွေးနွေးရမှာ၊ ညှိနှိုင်းရမှာ၊ တိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်း၊ ဆွေးနွေး၊ တိုင်ပင်တယ်ဆိုတာ စကားရည်လုပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ အရှုံးအနိုင်ရှာတဲ့ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေရှာတဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျမတို့အားလုံး ဦးတည်ရမယ်။
ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်၊ ပါလည်း ပါဝင်သင့်တယ်။ ကျမတို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားများဟာ နိုင်ငံရေးတာဝန်များလည်း ရှိတယ်။ ပညာရေးတာဝန်များလည်း ရှိတယ်။ ပညာရေးတာဝန်ဆိုတော့ ကျောင်းသားများဟာ ပညာရှာဖို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျမအမြင်တော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာဆိုတာ အများကောင်းကျိုးအတွက် သုံးနိုင်တဲ့ ပညာသာဖြစ်ရမယ်။ အများကောင်ကျိုးအတွက် မသုံးနိုင်တဲ့ ပညာဟာ တန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ အများကောင်းကျိုးအတွက် သုံးနိုင်တဲ့ ပညာမျိုးကို ရှာရမယ်။ ဒီလိုရှာတဲ့နေရာမှာ ပညာမာန်တက်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖြိုခွဲရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မနက်တုန်းက အခမ်းအနားမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အရင်တုန်းက ကျောင်းသားဟောင်း ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာ ပြောသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းက အပြင်မှာ တပ်တွေကရှိတယ်၊ တပ်မတော်သားများဟာ ရှိတယ်၊ အတွင်းမှာ ကျောင်းသားများဟာ ရှိတယ်၊ အဲသလို တပ်မတော်သားများက ကျောင်းသားများကို သေနတ်တွေနဲ့ ချိန်ထားတဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းသားများဟာ ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ အော်လိုက်ကြတယ်တဲ့။ မင်းတို့ သုံးယောက်ပေါင်းလို့မှ (၇) တန်းအောင်ရဲ့လားလို့ ပြောလိုက်ကြတယ်တဲ့။ (ဩဘာသံများ) ကျမနဲ့ နားလည်းမှုလွဲပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျမ မပြောသင့်ဘူးလို့ ပြောမလို့၊ ဒီလိုဟာ မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒီလို (ပြောတာဟာ) ပညာမာန်ပါတယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။
ရဲဘော်များ၊ တပ်မတော်သားဟာလည်း ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲ။ ဒီလိုတပ်မတော်ထဲကို ဝင်သွားရတဲ့ တပ်မတော်သားများဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေက လာလဲဆိုတာ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမယ်။ တော်တော်များများဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုထဲက လာတာပါ။ ကျမတို့တိုင်းပြည် ဆင်းရဲနေလို့ အဲ့ဒီလို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုတွေ ရှိနေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ပညာဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခါထဲ ပြောသွားမယ်။ ဒီတပ်မတော်သားများဟာ ဟုတ်တယ်၊ သုံးယောက်ပေါင်းလို့ (၇) တန်းအောင်ချင်မှလည်း အောင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ဟာ နှိမ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
အရေးအခင်းတုန်းက ပြည်သူလူထု အော်သွားတဲ့ ကြွေးကြော်သံ တခုရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ စစ်ပညာ၊ ကျောင်းသားပြည်သူ သတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ တပ်မတော်သားများကို စစ်ပညာပေးထားတယ်။ စစ်ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ဖို့၊ ပြည်သူလူထုအကျိုး ထမ်းဆောင်တဲ့ပညာပဲ။ အဲ့ဒီလို ပြည်သူလူထုအကျိုး ထမ်းဆောင်တဲ့ ပညာမရှိလို့သာ တပ်မတော်သားများကို ပညာမရှိဘူးလို့ ကျမတို့ ပြောရမှာပဲ။ (၇) တန်းမအောင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဆယ်တန်းမအောင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ တက္ကသိုလ်မရောက်လို့ မဟုတ်ဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည်သူလူထုအကျိုး ထမ်းဆောင်ဖို့ ပေးထားတဲ့ပညာကို အလွဲသုံးစား လုပ်လို့သာဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ ပညာဆိုတာဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသာ ပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်သားများလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ စစ်ပညာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ (၂၆) နှစ်အတွင်းမှာ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်တတ်တဲ့ပညာကို မပေးထားဘူး။ တပ်မတော်သားတွေကိုလည်း မှန်ကန်တဲ့စစ်ပညာကို မပေးထားဘူး။ အဲ့ဒီလိုမပေးတာလည်း ဦးနေဝင်းပဲ။ တရားခံကိုတော့ ကျမတို့ အားလုံးသိရမယ်။ ဦးနေဝင်း ဘာဖြစ်လို့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ဒီလောက်ကြာကြာ အုပ်စိုးသွားလဲ။ ကျမတို့အားလုံးကြောင့်ပဲ။ ပြည်သူလူထုက ဘာဖြစ်လို့ လူတယောက်ရဲ့ ဩဇာအာဏာ၊ မှန်မှန်မလုပ်နိုင်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဩဇာအာဏာ၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာကို နားမလည်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဩဇာအာဏာကို ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာ ဒီလောက်ကြာကြာ လွှမ်းမိုးခွင့်ပေးသွားသလဲ။ ဒါကျမတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အခု ဒီမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်များကတော့ တာဝန်အကင်းလွတ်ဆုံးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခုတောင်မှ (၂၆) နှစ်အရွယ်မရှိတဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ငယ်ငယ်လေးတွေမို့လို့ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အားလုံးကတော့ တာဝန်ရှိတာပဲ။ ဘယ်လိုမှ ကျမတို့ဟာ ဒီတာဝန် အောက်က ရုန်းကန်ပြီးတော့ ထွက်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးတာဟာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား အပေါင်းဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့အားလုံးဟာ တာဝန်ရှိခဲ့ပြီ။ အရင်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေအတွက် တာဝန်ရှိခဲ့ပြီ။ မှားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေ၊ မှားတဲ့ ပညာရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ဟာ နွှဲခဲ့ရပြီ။ နောင်ကျလို့ရှိရင် မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ပညာရေးလမ်းစဉ်တွေသာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ အခုအချိန်မှာ ကျောင်းတွေပိတ်နေတယ်။ ပညာရေးနဲ့ ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတာ ကျောင်းပညာရေးနဲ့ ကင်းကွာနေတယ်။ လောကထဲမှာ ပညာရှာနေတယ်။ လောကကြီးထဲမှာ ပညာရှာနေတဲ့အခါ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ပညာရှာတဲ့အခါမှာလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာရှာဖို့ လိုပါတယ်။ အများအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ ပညာ ရှာကြပါတယ်။ အများအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ ပညာဟာ ကျောင်းတခါမှ မနေဖူးတဲ့ လူတောင်မှ ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပညာတွေ ကျမတို့နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေမှာ အားလုံးရှိလို့ရှိရင် ဒီတိုင်းပြည်က နိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်း မှန်ကန်မယ်။ လူမှုရေးစနစ်မလည်း မှန်ကန်မယ်။ လူမှုရေးစနစ်၊ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ ပညာရေးစနစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာ အားလုံး ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဒါလည်း အားလုံးသိပြီးသားပဲ။ ဒီတော့ မှန်ကန်တဲ့ပညာ ရှာရေးဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ရေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခါထဲနဲ့ ကျောင်းသားများဟာ နိုင်ငံရေးရော၊ ပညာရေးရော အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျောင်းများပိတ်နေတာတောင်မှ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုလို့ရှိရင် ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇ ဇူလိုင်) သတိရတဲ့အခါမှာ အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းတယ်။ တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာ အင်မတန်မှ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြုမူသွားကြတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ တိုင်းပြည်တခုမှာ မဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့တိုင်းပြည်တခု ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင် ကျမတို့ ကြိုးစားရမယ်။ ဒီလိုယဉ်ကျေးတဲ့ တိုင်းပြည်တခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ စောစောက ဝိဓူရဦးချစ်မောင် ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ အနာဂတ်ဆိုတာကလည်း လူငယ်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ အများဆုံးပဲရှိပါတယ်။ ဒီအနာဂတ်ကို ချီတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ချီတက်သွားကြပါ။ ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေ့ရေးကို အမြဲပဲကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ တမင်သက်သက် တပ်မတော်သားများရဲ့ ပညာရေးကို ထည့်ပြီးတော့ ပြောတာပါ။ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ အစဉ်အမြဲကွဲနေလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတပ်မတော်သားများဟာ အင်မတန်မှ ဆင်းရဲတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းများက လာတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ သတိထားရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့မှာ ကြင်နာစိတ်တွေ ရှိရမယ်။
ဒီတပ်မတော်သားများဟာ ကျမတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလို ပညာသင်ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ တပ်မတော်ထဲမှာ ဦးနေဝင်းတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေးလိုက်တဲ့ စစ်ပညာတွေ၊ မမှန်မကန်တဲ့ စစ်ပညာတွေသာ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုမမှန်မကန်တဲ့ စစ်ပညာတွေအစား မှန်ကန်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ သွင်းပေးရမယ်။ ဒါ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲ၊ ဂုဏ်သက္ခာရှိတဲ့ တပ်မတော် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အထူးသဖြင့် စိတ်ဝမ်းကွဲနေတာကတော့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တပ်မတော် ကြားထဲမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တပ်မတော်လက်ထဲမှာ အခံရဆုံးက ကျောင်းသားတွေပဲ။ စစ်ဆိုလို့ ရေတောင်စစ်မသောက်ဖူးလို့ ကျမကို ပြောပါတယ်။ ရေ စစ်မသောက်လို့ရှိရင်တော့ ပိုးဝင်ရုံပဲရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ဒီလိုစိတ်တွေ ထားလို့မဖြစ်ဘူး။ ကျောင်းသားများဟာ ပညာသင်တဲ့လူတွေပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပိုပြီးတော့ သဘောထားကြီးရမယ်။ ပိုပြီးတော့ အမြင်ကျယ်ရမယ်။ သဘောထားကြီးကြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိရမယ်။ ပညာမရှိတဲ့လူနဲ့ ရုန်းနေလို့၊ နဘမ်းသတ်နေလို့လည်း မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ တန်းတူညီတူဖြစ်အောင် ပညာပေးပြီးမှ နဘမ်းသတ်တာမှ နဘမ်းသတ်ရကျိုး နပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုးစားကြပါ။
စစ်ပညာများ ပြန်ပြိးတော့ သင်ပေးနိုင်ရမယ်၊ စစ်ပညာဆိုတာ ပြည်သူ့အတွက်၊ ပြည်သူ့ကို ကာကွယ်ဖို့၊ ပြည်သူကိုသတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ သင်ပေးရမယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျမတို့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ မနေ့တနေ့တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အရိပ်ယောင်တွေ ပါတယ်လို့ ကျမ မြင်ပါတယ်။ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အရိပ်ယောင်ဆိုတာ ကျမ လုံးလုံးမနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒီလို အာဏာကို ကိုင်ပြီးတော့၊ လက်နက်ကို ကိုင်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ မသင့်တော်ပါဘူး။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မဟုတ်မမှန်ကန်တာတွေ ပြောပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီရေးကို ထိုးနှက်နေတယ်။ ဒါတွေက ဆိုးလှပါပြီ။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အာဏာစက် ဆက်ပြီးတော့ သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဖတ်ဆယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကလည်း ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာစက်သုံးတဲ့ အလေ့အထကြီးကိုတော့ ကျမတို့ ဒီကနေပြီးတော့ ရပ်ဆိုင်းရတော့မယ်။ နဝတ အနေနဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ စေတနာရှိရင်၊ နဝတ အနေနဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ အမိန့်အာဏာကို လွန်ဆန်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိရင် အာဏာစက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လုံးလုံး ဆက်ပြီးတော့ မသုံးပါနဲ့တော့။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အင်အားစုတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း၊ ဆွေးနွေး၊ တိုင်ပင်ရဲတဲ့ သတ္တိကိုသာ မွေးမြူပါ။ အဲ့ဒါမှ တကယ့်သတ္တိပါ။ သေနတ်ကြီးရှိလို့ ပစ်ရဲတယ်ဆိုတာဟာ သတ္တိမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမှ လက်ထဲမှာ မရှိဘဲနဲ့ အမှန်တရားအရ အဖြေရှာချင်တဲ့ သတ္တိမျိုးသား ကျမတို့ လိုချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အင်အားစုများကလည်း အတိတ်ကဖြစ်ရပ်များကို စဉ်းစားပြီးတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ သန္နိဌာန်ချကြပါ။ ကျမ ဒါ ထပ်တလဲလဲပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင် ကျမတို့ တနေ့မဟုတ်တနေ့ အောင်မြင်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ မှန်ကန်တဲ့အင်အား၊ ညီညွှတ်မှုအင်အားကို ဘယ်သူမှ ရေရှည်လွန်ဆန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နဝတ လည်း လွန်ဆန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်လည်း လွန်ဆန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နဝတတို့၊ တပ်မတော်တို့ဆိုတာလည်း ပြည်သူလူထုက ကျွေးမွေးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးမသိတတ်လို့ရှိရင်တော့ ဒုက္ခရောက်စမြဲပဲ။ ဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ခြိမ်းခြောက်တာကြောင့် မကြောက်ပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ သတ္တိဆိုတာတော့ ရှိပါ။
ကျမကို ဆရာတော်ကြီးတပါးကနေပြီးတော့ မိန့်လိုက်သလိုပေါ့လေ။ အရင်တုန်းက ဖေဖေ့ကိုလည်း မိန့်ခဲ့ပါတယ် ဆိုပြီး ကျမကို ထပ်ပြီးတော့ မိန့်လိုက်ပါတယ်။ ခြောက်တိုင်းလည်း မကြောက်ပါနဲ့၊ မကြောက်ဘဲလည်း မနေပါနဲ့ပေါ့လေ။ ခြောက်တိုင်းလည်း မကြောက်ပါနဲ့၊ မကြောက်ဘဲလည်း မနေပါနဲ့ဆိုတာဟာ သတိထားရမယ်။ အကာအကွယ် ယူရမယ်။ ဒီလိုခြိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတာ နားလည်ရမယ်။ ဘယ်လိုသဘောနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေသလဲဆိုတာ ကျမတို့ နားလည်ရမယ်။ ကျမတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ကတော့ ညီညွှတ်မှုအင်အားပဲ၊ စည်းကမ်းပဲ။ ကျမတို့ ညီညီညွှတ်ညွှတ် စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ကို ရန်ရှာဖို့ အင်မတန်မှ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ အခုလို ကျောင်းသား လူငယ်များဟာ စည်းကမ်းရှိရှိ တညီတညွှတ် အခမ်းအနာကြီး ကျင်းပသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ အားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်တုန်းကလည်း ပါတီပေါင်းများစွာဟာ (၇) ရက်နေ့ ဇူလိုင်လ အခမ်းအနားများကိုလည်း ကျင်းပသွားပါတယ်။ ဒီလိုညီညွှတ်မှုအင်အားဟာ တနေ့ထက်တနေ့ တက်လာတယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုတက်လာတဲ့ ညီညွှတ်မှုအင်အားနဲ့ပဲ ကျမတို့ အောင်ပန်းကို ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်သွားမှာပါ။ တဖြေးဖြေး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပိုပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်ရေးအတွက် ကျမတို့ ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားရမယ်။
ဒီနောက် တလ၊ နှစ်လအတွင်းမှာ ဆိုလို့ရှိရင် အခမ်းအနားအမျိုးမျိုး ကျင်းပရမယ်ဆိုတာ ကျမ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကနေပြီးတော့ (၇) ရက်နေ့ ဇူလိုင်လ၊ (၁၉) ရက်နေ့ ဇူလိုင်လဆိုပြီးတော့ ကြိမ်းမောင်းနေတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ကျမ ကြိမ်းမောင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတိပေးနေတာပါ။ ပြည်သူလူထုကို၊ ဒီအခမ်းအနားတွေရှိတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်အားလုံးဟာ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လက်နက်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ နောင်ထပ်ပြီးတော့ လက်နက်နည်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ မဖြေရှင်းနိုင်အောင်လို့ ကျမတို့ ကြိုးပမ်းသွားရမယ်။ စည်းကမ်းရှိရှိ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကြိုးပမ်းသွားရမယ်။ ဒါပဲ ကျမ ထပ်တလဲလဲ ပြောသွားတာပါ။ ကျမ စပီကာမကောင်းလို့ အော်မိလို့ ကြိမ်းမောင်းနေတယ်ထင်သလားတော့ မသိဘူး။ ဒီတော့ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုက ဒါကို စိတ်ထဲမှာထားပါ။ နောင် ဒီတိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လက်နက်နည်းနဲ့ မဖြေရှင်းရေး၊ မဖြေရှင်းနိုင်အောင်လို့ ကျမတို့ ကြိုးစားရမယ်။ ဆက်ပြီး ကြိုးစားသွားရမှာပဲ။ ဒီ နှစ်လ၊ သုံးလရဲ့ ပြဿနာများကို ကျမတို့ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ ဒီမိုကရေစီကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရနိုင်တယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်။ အရင့်အရင်တုန်းက ကျောင်းသားလူငယ်များဟာလည်း ဆက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကို ထမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ အားလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်၊ သတ္တိရှိရှိ၊ သတိရှိရှိနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်သွားကြပါလို့ တောင်းပန်ရင်းနဲ့ ကျမ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားသော “ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး (Freedom from Fear)” စာအုပ်ကို မြန်မာ ဘာသာပြန်၍ ဒေါက်တာအောင်ခင် တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေထားသည့် စာအုပ်မှ ကူးယူးဖေါ်ပြပါသည်။)
((( ကိုဇော်မင်းဦး Zaw Min Oo ဖေ့ဘုစ် စာမျက်နှာမှ (( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းများ - ၈ Freedom from Fear - 22 ဆောင်းပါးမှ ကူးယူပါသည် ။ ကူးယူခွင့်ပေးသော ကိုဇော်မင်းဦးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။ )))))
Ag Myint Tham
သက်မဲ့ မဟုတ်သော လူသားတွေမှာ
ဖျားလိုက် နာလိုက် ၀မ်းလျှောလိုက်
ပြေးလိုက် ပုန်းလိုက် ငရဲမီးလိုက်
ဆူညံလိုက်တာ ယမ်း ခွဲသံ
မေခ မလိခ ပေါင်းစုံရာ
ရောနှောကာ ပေါင်းပြီး စီးတော့
ဒုက္ခ မဖြစ်ပါစေ မဆုတောင်းနဲ့
စစ်ဖြစ်အောင် လုပ်သူတွေကို တား
ဒုက္ခဖြစ်အောင် လုပ်သူတွေကို တား။
အသံတွေ ကြားနေရတဲ့ မီးရောင်ကြားက လူ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:34 AM No comments:
၅။ ပုဂံပြည် နရပတိစည်သူမင်းလက်ထက် (သာသနာ ၁၇ - ရာစု)၌ သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ ဆပ္ပဒမထေရ်နှင့်အတူ လိုက်ပါလာသော ရာဟုလာမထေရ်သည် မလ္လာယုကျွန်း (မလေရှား)သို့ သွား၍ ဘုရင်အား ခုဒ္ဒသိက္ခာကျမ်းကို သင်ကြားပို့ချပေးကြောင်း ကလျာဏီကျောက်စာအဆိုကို သိရခြင်း
စာရေးသူ ဤထက် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ဤ၌ ဤမျှသာ ရပ်ပါရစေ။ လိုရင်းတိုရှင်းပါ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:30 AM No comments:
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ ၉၊ ၂၀၁၂
ဦးမောင်အေး (ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ငြိမ်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) ဦးနှောက်သွေးကြော ရောဂါကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေ
ဦးမောင်အေး (ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ငြိမ်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) သည် ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ဦးမောင်အေးသည် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တပ်မတော်...စစ်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရပြီး ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့) တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Mount Elizabeth ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူဖွယ် ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ဦးမောင်အေးသည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး DSA အပတ်စဉ် (၁) ဆင်းဖြစ်ကာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ တပ်မတော်တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရာထူးမှ အနားယူသည်အထိ တပ်မတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၅၆ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၁၀ ၂၀၁၂
on Tuesday, July 10, 2012 at 2:07am ·
သမတကြီး က တော့ မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြော သွား ပါ ဘီ ခင်ဗျာ ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ က ပြုပြင် ပြောင်း လဲ
တွေ လုပ်လိုက်တာ ၊ ပထမ အဆင့်တောင် ပြီး သွားလို့ ဒုတိယ အဆင့် ကို အရှိန် အဟုန် နဲ့ ဆက်
လုပ် ပ မယ် တဲ့ ခင် ဗျာ ၊ ပထမ အဆင့် က ဘယ် လို များ ပြီး သွား သလဲ မသိ လိုက် ရ ပါ ခင်ဗျာ
အခု ဒုတိယ အဆင့် လုပ် တာ ကို တော့ အခု ယူရို ဘောပွဲ ကြည့် သလို ပွဲစဉ် ဇယား ထုတ် ပေးထား
ရင်တော့ အိပ် ရေး ပျက် ရင် ပျက် ပ လေ့ စေ ၊ သေ ချာ လေး တော့ စောင့် ကြည့် ပ မယ် ခင် ဗျာ။
ကြားနေ ရတာ က တော့ ဝန်ကြီး ဌာန တွေ အများကြီး မထား တော့ ဘူး ။ ဒေါ်လာဈေး ကို တထောင်
ဝန်ကျင်လောက် ဖြစ်အောင်ဆွဲ တင် မယ် ၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ ကို ပုတ်ဂလိကကို အကုန် လွှဲမယ်
ပြန်ကြားရေး နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန တွေ ပေါင်းမယ် ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ ပို့ဆောင်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနတွေ ပေါင်းမယ် ၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှု ပေါင်းမယ် ၊ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ မီးရထား ဝန်ကြီးဌာန
တွေ ပြန်ပေါင်းမယ် လို့ ကြားနေရပါတယ်။
ဟို အရင် ဦးစောမောင် တက်ခါစ ငြိမ်ပိ လက်ထက် ဝန်ကြီး ဌာန တွေ ထက် မနဲ ၊ ဦးနေဝင်း ခေတ်
တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက် ခါ စ လောက် မများ ၊ တဲ့ ဝန်ကြီး ဌာ န ဦးရေ ၊ ပျန်းမျှခြင်း အစိုးရ ပေါ့
ခင် ဗျာ ။ တကယ် တမ်း ဘယ်လို ပြောင်း လဲ တယ် ဆို တာ ကို တော့ တီဗွီ မှာ ကြေ ငြာ တော့ မှ
သိ ရ မှာ ပါ ခင် ဗျာ။
အမေစု က လည်း ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ရေး တွေ လုပ် ရင် ပညာရေး ကို အခြေ ခံ မှ စ ပြီး ပြု လုပ် ဘို့
လို ကြောင်း ပြော သွား ပါ တယ်။ အမှန် ဆုံး ပါ ခင်ဗျာ ၊ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ ပညာ ရေး က တွေး
ကြည့် လေ ရင် မော စရာ ကောင်း လေ ပါ ဘဲ ၊ မတွေး ဘဲ ၊သတင်း ဘဲ နားထောင် ၊ တီဗွီ ဘဲ ကြည့်
သတင်း စာ ကို ဘဲ ဖတ် မယ် ဆိုရင် တော့ အို ကေ သလို လို ပါ။ မနှစ် က ဆေး တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်
နောက်ဆုံး အမှတ် က ၅၅၀ ဆိုလား ပါ ခင်ဗျ ၊ ၆ ဘာ သာ ကို အမှတ်ပေါင်း ၅၅၀ ရ တယ် ဆိုတာ
နဲနဲ နောနော မဟုတ်ရ ပါ။ ပျန်းမျှ အမှတ် ၉၀ ကျော်ပါ။ အင်း ဘယ်လိုများ ရ ကြ ပါ လိမ့်၊ မြန်မာစာ
ဘိုင်အို ဆိုတာ က ၇၀ ကျော် ရ ဘို့ ဆိုတာ ၊ ကျွန်တော် တို့ ငယ် ငယ် က အိမ် မက် တောင်
မ မက်ဘူး ပါ ခင် ဗျာ။
တလော က စာစောင် တခု ထဲ မှာ ရီစရာ ရေး တာ လေး ဖတ် လိုက် ရ ပါ တယ်။ တိုင်း ပညာရေးမှူး
က ကျောင်းတွေ ကို စစ် ဆေး ရေး သွား တာ လေး ရေး ထား တာပါ။ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ က ကျောင်း
တ ကျောင်း ရောက် တော့ ၊ သင်ထောက်ကူ ၊ ကဘာလုံး ပုံစံတူ ၊ လေး ကိုင်ပြီး ၆ တန်း ကျောင်းသား
တယောက် ကို မေးခွန်း မေး ပါ သတဲ့ ၊ မေး တဲ့ မေး ခွန်း က ၊ ကဘာကြီး က ဘာ လို့ နှစ်ဆယ့်သုံး
နှစ်ပိုင်း တ ပိုင်း ဒီဂရီ စောင်း နေ ရ ပါ သလဲ လို့ မေး ပါ တယ်။
ကျောင်း သား က ပြာ ပြာ သလဲ ဖြစ် သွားပြီး ၊ သူ ဖြေလိုက် ပုံ က ၊ ဟာ အဲ လို စောင်း သွား တာ
ကျွန်တော် လုပ်တာ မဟုတ်ပါ ဘူး ခင်ဗျ ၊ ကျွန်တော် ဒီ ကဘာလုံး ကို တခါ မှ မကိုင်ဘူး ပါဘူး ခင်ဗျ
လို့ အဖြေ ပေး ပါတယ် ၊ အတန်း ပိုင် ဆရာ မ က လဲ ၊ ဟုတ်ပါ တယ် ၊ ဒီ ကလေး က ဒီလောက်
အဆော့ မသန်ပါဘူး ၊ တခြား ကလေးတွေ ဆော့ လိုက် လို့ စောင်း သွား တာ ပါ လို့ ဖြေ ပါ တယ်။
ပထဝီ သင် တဲ့ ဆရာ မ က တော့ ဝင် ပြော ပေး ပါ တယ် ၊ ဟုတ်ပါ တယ် ရှင့် ၊ ‘ဒီ ကဘာ လုံး က
စောင်း သွား တဲ့ ကိတ်စ က ၊ ကလေး တွေ ဆော့ တာ မဟုတ်ရပါဘူး ရှင့် ၊ ကျွန်မ က သူတို့ ကို
ပေး မဆော့ ပါဘူး ၊ ရို ရို သေ သေ ဘီရို ထဲ သိမ်း ပါ တယ် ၊ အမှန် က ဒီ ကဘာ လုံး ကြီး က
ကျောင်း အုပ်ကြီး က ၊ မြို့ က ယူ လာ က တဲ က ၊ အ စောင်း ကြီး ယူ လာ တာ ပါ တဲ့ ခင် ဗျ။
ဒီလို မေးတာ ဖြေတာတွေ လဲ ကြားရရော ၊ တိုင်း ပညာရေးမှူး ရဲ့ မျက်နှာ က ဒေါသ နဲ့ နီရဲ လာ ပါ
တယ် ၊ ဒါ နဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး က ပြေ ရာ ပြေ ကြောင်း ပြော ရ ရှာ ပါ တယ်၊ ဟုတ် ပါ တယ်ခင်ဗျာ
ဒီ ကဘာလုံး ကို တခြား စာအုပ်တွေ ၊ ဗလာစာအုပ် တွေအများကြီး နဲ့ ရော သယ်မိ လို့ စာအုပ်ပိ ပြီး
စောင်း သွား တာ ပါ ခင် ဗျာ ၊ နောက် တခါ ဆို ရင် ဒီလို မစောင်း အောင် ဂရုစိုက် ပ မယ် ဆို ပြီး
မျက်နှာ သေ လေး နဲ့ ပြော ရှာ ပါ တယ်။
မြို့နယ် ပညာရေးမှုး က လဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ် သွား တဲ့ မျက် နှာ နဲ့ ၊ ဆရာကြီး ရာ ၊ ကဘာလုံး
စောင်း နေတာ မြင် ရင် လဲ ၊ စော စော စီး စီး ၊ ကိုယ့် အား ကိုယ် ကိုး ပြီး ၊ မိဘ ဆရာ အသင်း
ရံပုံငွေ နဲ့ ပြင်ထား ရော ပေါ့ ဗျာ ၊ အခု တော့ ပြော စရာ ဖြစ် ပြီ ပေါ့ ၊ တိုင်း ပညာ ရေးမှူး ကြီး
ခင်ဗျာ ၊ နောက် ကို ဒီလို မဖြစ် စေ ရ ပါ ဘူး ခင် ဗျ၊ အခု ဘဲ ရုံးစာ ထုတ်ပ မယ် ၊ ကျွန်တော့
မြို့နယ် တွေ ထဲ က ကျောင်း တွေ အား လုံး ၊ ကဘာလုံး ကို ဂရုစိုက် ထိမ်းသိမ်းဘို့ နဲ့ စောင်း နေတာ
ရှိရင် ချက်ချင်း ပြန်ပြင် ဘို့ ၊ လိုအပ် ရင် အထက် ကို တင် ပြ ဘို့ ရုံးစာ ထုတ် ပ မယ် ခင် ဗျာ တဲ့ ။
တိုင်းပညာရေးမှူးကြီး လဲ နထင် ကို သွေးတိုး သွား တာ ဘဲ အဖတ် တင် ပါ တယ် ၊ ဖြေ တဲ့ လူ တွေ
က အလွန် မရှိ ပါဘူး ၊ မေး တဲ့ လူ ရဲ့ အပြစ် ပါ ခင် ဗျာ ။ ပညာရေး ကို ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ရေး
လုပ် မယ် ဆို ရင် ၊ အောက် ခြေ မူ လ တန်း အဆင့် က စ ပြီး ၊ ပြောင်း နိုင် မှ သေချာ မှာ ပါ။
နောက်တခု က ကျွန်တော်တို့ တတွေ အင်္ဂလိပ်စာ ၊ အင်္ဂလိပ် စကား ကို ဒီ နေ့ အထိ ၊ တန်းဝင် အောင်
အဆင့်မီအောင် မပြောနိုင်တာ ၊ စကား ပေါက် အောင် မပြော နိုင်တာ တွေ ပါ ၊ တနေ့ က
အင်တာနက် မှာ အီဂျစ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ် နဲ့ အီဂျစ် ရုပ်မြင်သံကြား တို့ အင်တာဗျူး တာ
တွေ့ ရ ပါတယ် ၊ သံအမတ်ကြီး ခမျာ ၊ ကိုယ်ပြော မဲ့ စကား လူငှား ပြော ရ တာ တွေ ၊ ကြား ထဲ က
စကားပြန် လုပ်ပေး တဲ့ ဗမာ သံမှူး လား ၊ ရုံးအုပ် လားတော့ မသိပါ ခင်ဗျာ ၊ ရက်စ် နိုး အောရိုက်
အိုးနင်း ခွက်နင်း နဲ့ ရှင်း ပြ တာ ၊ ရိုဟင်ဂျာ အရေး ၊ ကိုယ့် နိုင် ငံ က ဘဲ တရားခံ ဖြစ် ရ မဲ့ ပုံပါ။
အင်္ဂလိပ်စာ က လဲ ဗျာ ၊ ဆယ်တန်း အထိ လဲ နှစ် တိုင်း သင် ရ ၊ တက္ကသိုလ်ရောက် တော့ လဲ ထပ်
သင် လိုက် ရတာ ၊ ဆယ် နှစ် ဆယ် မိုး ၊ အမျိုး မျိုး သင် ခဲ့ ရ ပေ မဲ့ ၊ တိုး မပေါက် သေး ပါ
ခင် ဗျာ ။ သူများ နိုင်ငံ တွေ ၊ ပညာသင်သွားရလို့ ဒုတိယဘာသာ စကား ၊ ဂျာမန် ၊ ဂျပန် ၊ ရုရှ
ပြင်သစ် ၊ စပိန် ၊ ဘာ ဘဲ သင်သင် ၊ ဘာ သာ စကား ထပ် သင် ဘို့ က ၊ အချိန် ၆ လ က နေ
၉ လ အထိ အများ ဆုံးပေါ့ ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော် တို့ က အင်္ဂလိပ်စာ ကို ၁၀ နှစ် ၁၀ မိုး မက
သင် ခဲ့ ကြ ရ ပြီး ၊ ကိုယ် ပြော တာ လဲ သူများ နား မလည်၊ သူ များ ပြော နေ တာ လဲ ကိုယ်
နား မလည် ဖြစ် နေ ရတာ ၊ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တာ ပြန် သုံး သပ်ဘို့ လို နေ ပါ ဘီ။
တကယ်တော့ ဘယ်ဘာသာ စကား က မှ အခက်ဆုံး ဆို တာ မရှိ ပါဘူး ၊ ပါတ်ဝန်းကျင် ရှိရင်
တတ်ပါတယ် ၊ မွေး ကတဲက အင်္ဂလန် မှာ မွေး လာ တဲ့ ခလေး တို့ ၊ ဘို အိမ် မှာ စားပွဲထိုး တို့
မာလီ တို့ ဂိတ်စောင့် တို့ လုပ် လာ တဲ့ လူ တွေ မှာ ပညာ အခြေခံ မရှိဦးတော့ အင်္ဂလိပ် လို
မွှတ်နေအောင် ပြောနိင် ဆို နိုင် ရှိကြပါတယ် ၊ အင်္ဂလိပ် လို မပြော တတ် တဲ့ သူ ကို အင်္ဂလန် ကို
၆ လ လောက် ပို့ထားရင် ၊ ခန နေရင် ၊ သူ လဲ မွှတ် နေအောင် ပြော တတ် မှာ ပါ။
အင်္ဂလိပ်စကား ပြော တတ်ဘို့ ရာ ပထမ ဦးဆုံး က အသံထွက်မှန် ရ ပါ မယ်၊ အသံမှန် ကို သိမှ
သူများ ပြောတာ ကိုယ် မှန်မှန် ကန်ကန် ကြား ပြီး နားလည် နိုင် မှာပါ ၊ ကိုယ့် အသံ က လဲ
အသံထွက် မှန် မှာ ၊ သူ များ က ကိုယ် ဘာ ကို ဆို လို တယ် ဆို တာ သိမှာပါ။ ခု များ တော့ ဗျာ
မြန်မာပြည် က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ ဆရာမ တွေ က အဆင့် မီမီ ပြော နိုင် တဲ့ သူ နည်း ပါ တယ်။
အများ စု က တလွဲ တွေ ပြော နေ တာ များ ပါ တယ်။ ကျွန်တော် တို့ က အင်္ဂလိပ်စာ ကို ၁၀ နှစ် ၁၀
မိုး မက သင် ခဲ့ ကြ ရ ပြီး ၊ ကိုယ် ပြော တာ လဲ သူများ နား မလည်၊ သူ များ ပြော နေ တာ လဲ
ကိုယ်နား မလည် ဖြစ် နေ ရတာ ၊ အဓိက အချက် က စာ အမှန် ၊ အသံ အမှန် ကို မသင် ခဲ့ ရ လို့ ပါ။
ကျွန်တော် တို့ က အင်္ဂလိပ်စာ ကို ၁၀ နှစ် ၁၀ မိုး မက သင် ခဲ့ ကြ ရ ဆိုတာ ၊ တလွဲ တွေ သင်
တလွဲ တွေ အသင် ခံ ရ ပြီး အချိန် ကုန် ၊ အကျိုး မရှိ ဖြစ် နေတာပါ။ ပညာရေး ကို ပြု ပြင်
ပြောင်း လဲ မယ် ဆိုရင် လဲ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ ဆရာမတွေ ကို နေးတစ် စပီကာ တွေ ခေါ်ပြီး
သေချာ သင် ၊ စာ စ သင် မဲ့ သူ က စ မမှား အောင် ကြို တင် ပြင် ဆင် သင့် ပါ ဘီ ခင် ဗျာ။
နောင် မျိုး ဆက် သစ် တွေ ကို ၊ နိုင်ငံ တကာ မှာ ယှဉ်ပြော ရင် အင်္ဂလိပ် စကား ကို တန်းဝင် အောင်
အဆင့်မီအောင် မပြောနိုင်တာ ၊ စကား ပေါက် အောင် မပြော နိုင်တာ တွေ မဖြစ် စေသင့် တော့ ပါ ခင်ဗျာ ၊
ဒီ နေ့ နိုင်ငံရေး လောက ထဲ က လူ တွေ အလုပ် လုပ် ဘို့ လို နေ ပါ ဘီ၊ ဝေ ဘန် လေ ကန် ၊ တဦး
ကို တဦး အပုပ်ချ တာ တွေ လုပ် နေမဲ့ အစား ၊ သူများ ညံ့ ကြောင်း ပြော ချင် လို့ ၊ ကိုယ် တော်
ကိုယ် တတ် ကြောင်း ၊ အကျိုး မရှိ အချိန် ကုန် ခံ မဲ့ အစား ၊ ကိုယ် လုပ် တာ ကို ၊ နိုင်ငံ နဲ့ လူ မျိုး
အကျိုး ဦးတည် ပြီး လုပ် ပေး ကြ ပါ ခင် ဗျာ။
ဘာ ဘဲ လုပ် လုပ် ၊ ဥပဒေ အထိမ်း အကွပ် လို ပါ တယ် ၊ ဥ ပဒေ ချမှတ် ပြီး ရင် ၊ ဥပဒေ ပါ
ရည်ရွယ်ချက် ကို ဘယ် သူ က ဘဲ အကောင် အထည် ဖော် ဖော် ၊ လမ်း လွဲ စရာ မရှိ ပါဘူး ခင်ဗျာ
ပညာရေး မှာ အစိုး ရ က သာ မက ၊ ပုတ်ဂလိက ၊ နိုင်ငံတကာ က ပါ ဝင် ရောက် ဆောင်ရွက် ခွင့်
ပေး ဘို့ လို ပါ တယ်။ အစိုးရ တက္ကသိုလ် ၊ အစိုးရ ကျောင်း ၊ မှ တပါး အခြား မရှိ ဆို တာ က
တိုးတက် ဘို့ အကြောင်း မရှိ ပါဘူး ခင် ဗျာ ။ စင်္ကာပူတို့ မလေးရှား တို့ ယိုးဒယား တို့ မှာ လဲ
သူတို့ နိုင်ငံပညာရေး မှာ အစိုး ရ က သာ မက ၊ ပုတ်ဂလိက ၊ နိုင်ငံတကာ က ပါ ဝင် ရောက်
ဆောင်ရွက်နေ တာတွေ တွေ့ ရ မှာ ပါ။
အခုလဲ ကြားနေရတာ က အရင် အာအိုင်တီကြီး ကို အရင်လို ဘဲ ဆယ်တန်း အောင် တဲ့ ကျောင်း သား က စပြီး
ပြန် လက် ခံတော့ မယ် ဆို တာ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတော်ကြီး က ပိတ်ထား တာ ကြာ
ဘီဆိုတော့ နှမြောစရာပါ။ မနှစ် က စပြီး အဆောက် အဦးတွေ ပြင်နေတာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ဆောက်
လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်တွေ ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း
က လူ တွေ အစည်းအဝေးတွေ ခေါ်ပြီး ကိုယ် တတ် နိုင် တာ ကိုယ် ပြင် ပေး နေ တာ တွေ့ ရ ပါတယ်။
ခေါင်မိုး မိုးယိုတာ ပြင်နိုင်တဲ့ လူ က တမျိုး ၊ ကျောင်းရှေ့ ရေပန်းကြီး ကို အရင် က အတိုင်း ပြန် လုပ်
ပေးတဲ့ သူ က လုပ် ပေး ၊ အေ ဘီ စီ ဒီ ဘလောက် တွေ ကို အရင် က အတိုင်း ၊ ကုတင် တို့ ဘီရို
တို့ ပြန် လှူတဲ့ လူ က လှူ ၊ အခန်း တွေ ဆေး သုတ် တာ တောင် အရင် ခေတ် က အရောင် လေး
တွေ ပြန် သုတ် တာ နဲ့၊ ဗကျာင်း ကြီး က အခု အတော် လှ နေပါ ဘီ။
လှူတဲ့ သူ တွေ က လဲ စိတ်ကူးလေး တွေ ကောင်း ကြ သဗျာ ၊ လှူ ရင်း နဲ့ ၊ ဖဲ သမား အလှူ ရှင်
တယောက် ဆို ရင် ၊ သူ ကျောင်း တက် တုံး ၊ အေ ဘလောက် မှာ ဖဲ ရိုက် တုံး အဆောင်မှူး ဦးဘမြင့်
လိုက်ဖမ်း လို့ ဘီ ဘလောက် ဘက် ဆင်းပြေး တာ မှာ သုံး ခဲ့ ရ တဲ့ ဖြတ်လမ်း လေး ၊ အခု ခြုံ တွေ
ဖုံး နေ လို့ လမ်း ပျက် နေ တာ မြင်တော့ ၊ တ သ သ နဲ့ ပေါ့ ဗျာ ၊ အခု အဲဒီ ဖြတ်လမ်း လေး ကို
ထူး ရှယ် ၊ ပြန် ပြင် ထား ပါ တယ် ၊ နောင် လာ နောက် သား ဖဲ သမား များ ၊ အစဉ် အလာ မပျက်
ဆက် ပြီး အသုံး ပြု နိုင် အောင် ပါ တဲ့ ခင် ဗျာ။
သူ က ပြောတာ က ၊ အခု လို အောင် မြင် တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ရှင် အင်ဂျင်နီယာကြီး
တယောက်ဖြစ်လာဘို့ က အာအိုင်တီ မှာ ဖဲ ရိုက်ခဲ့ တဲ့ အလေ့အကျင့် တွေ က ကောင်းကောင်း
အထောက်အပံ့ ပြု ပါ တယ် တဲ့ ခင်ဗျ ၊ ကိုယ့် မှာ ရှိ တဲ့ အခွင့် အရေး ကို အကောင်း ဆုံး အသုံးချ
တတ်တာ ၊ မလိုအပ် ဘဲ လောမကြီး အောင် မှင် နဲ့ နေ တတ် တာ ၊ ဘယ် သူ က ဘာ ဖြစ် လောက်လဲ
အမှန်ဆုံး ခန့် မှန်း တတ်တာ ၊ ရှေ့ ဖြစ် လာ နိုင်တဲ့ ဖြစ် နိုင် ခြေ ကို သုံးသပ် တတ်တာ ၊ ရှေ့ ဆက်
ပြီး လုပ် သင့် မလုပ်သင့် စက်ကန့် ပိုင်း အတွင်း ဆုံးဖြတ် တတ်တာ ၊ ကိုယ့် မှာ ငွေ ပြတ် သွား ရင်
ချက် ချင်း အဆင် ပြေ အောင် ဖန်တီး တတ် တာ ၊ အနိုင် အရှုံး လောကဓံ ကို တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် နဲ့
ရင် ဆိုင် ဖြေ ရှင်း တတ် တာ ၊ လူ့လောက ကို ဖြတ်သန်း ဘို့ လိုအပ် တဲ့ အရည်အချင်း တွေ ကို
ဖဲ ရိုက်ရင်း လေ့ ကျင့် ယူ ရ ပါ တယ် တဲ့ ခင် ဗျ ၊ ယောက်ကျားကောင်း တို့ တတ် အပ် တဲ့
ပညာ တွေ ထဲ မှာ လဲ ဖဲ ရိုက် တတ်ဘို့ လို ပါ တယ် တဲ့ ခင် ဗျ ၊ သူ ပြော တာ လေး ကို ကြုံ
လို့ ပြော ပြ တာ ပါ ခင် ဗျာ ၊ ဘုရား ဟော စကား မဟုတ် လို့ လိုက် လုပ် စရာ မလို ပါ ခင် ဗျာ။
အခု အာအိုင်တီ မှာ လက် ခံ မဲ့ ကျောင်း သား တွေ က အရင် လို ဖား တပိုင်း ငါး တပိုင်း အဆင့်
လိုက် ၊ ဖားလောင်း က နေ အေဂျီတီအိုင် ဘီတက် ဘီအီး ဘွဲ့ ကို တဆင့်ချင်း ပြောင်း တာ မျိုး မဟုတ်
ဘဲ တခါ တဲ ဘီအီး ဘွဲ့ ကို တန်း တက် ရ မှာ ပါ တဲ့ ခင် ဗျ ၊ အသစ် တွေ ဘယ် လို ပြောင်း ပြောင်း
အဟောင်း ကို တော့ တလည် လည် ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဝင်ခွင့် အမှတ် က တော့ မြင့် ပါ လိမ့် မယ်
အခု ပုံစံ ပြောင်း လိုက် လို့ ရ လာ မဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တွေ အရည်အချင်း ရှိ မရှိ က တော့ အနည်းဆုံး
၆ နှစ် တော့ စောင့် ကြည့် ရ ဦး မှာ ပါ ၊ တကယ် တန်း ကျ တော့ ၊ သင် တဲ့ ဆရာ တွေ
အရည် အချင်း ရှိ မရှိ ၊ ကြည့် ယုံ နဲ့ ခန့် မှန်း လို့ ရ ပါ တယ်။ ဆရာ က ဘာ မှ မ တတ် ဘဲ
တပည့် ကောင်း ရ ဘို့ ၊ မျော် လင့် လို့ မဖြစ် နိုင် ပါ ခင် ဗျာ ။
ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ရေး ဆို လို့ ၊ အခု တလော တယ် လီဖုန်း ၅၀ဝ၀ တန် ကိတ် စ သွေး အေး သွား
သလို ဖြစ် နေ ပါ တယ် ။ ကျွန်တော် က လာအို ကို ခန အလည် ရောက် ပါ တယ်။ လာအို မှာ
ဂျီအက်အမ် ဖုန်းနံပါတ် တခု ၊ ဆင်းကဒ် တခု ကို ၁ ဒေါ်လာခွဲပါ။ ဘာ မှတ်ပုံတင် မှ ပြစရာ မလို
ပါဘူး ။ မြို့လည်ခေါင် ဥယာဉ် ထဲက ခိုစာ ရောင်း တဲ့ အဒေါ်ကြီး ရဲ့ ဈေးဘန်း ထဲ က ဝယ်လာတာပါ
အဲဒီမှာ ဖုန်းကဒ် ဆင်းကဒ် က ပေါ မှ ပေါ ပါ ၊ ထမင်းဆိုင် အရက် ဆိုင် ၊ အကြော်ဆိုင် ၊ ဆိုက်ကား
ဂိတ် ၊ ဓါတ်ဆီ ထဲ့ တဲ့ နေ ရာ ၊ ဘယ် နေ ရာ ဝယ် ဝယ် ၊ ဈေး အတူ တူ ပါ ခင် ဗျာ။
ကျွန်တော်ပြောတာ တော့အပ် ကဒ် ကို ပြော တာ မဟုတ်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ် ပါ တဲ့ ဆင်းကဒ် ကို ပြော
တာပါ။ အဲဒီ ဖုန်းနံပါတ် ကို ကိုယ် က ကြိုက် သွား လို့ ၊ အပိုင် လို ချင် တယ် ၊ ဒါ မှ မဟုတ် ဖုန်း
က ဘယ်ထား မိ သွားလို့ ပျောက်သွား တာ ကို ၊ အဲဒီ နံပါတ် ဘဲ ပြန် ရချင် တယ် ဆို ရင် တော့
မှတ်ပုံတင် ပြ ပြီး စာရင်း သွင်း ထားဘို့ လို ပါ တယ် တဲ့။ ဈေး ချို လိုက် တာ ဗျာ။
မေး ကြည့် တော့ ၊ ကမ်ဘောဒီးယား မှာ က ပို ပြီး ဈေး ချို ပါ သတဲ့ ဗျ ၊ တဒေါ်လာ ဝန်းကျင်ဘဲ
ပေး ရ ပါ သတဲ့ ခင် ဗျ။ ကျပ် ၁၀ဝ၀ တောင် မပြည့် ပါဘူး ။ ဘယ်လို များ ဖြစ် ရ ပါ သလဲ ခင် ဗျာ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး က လူ တွေ ၊ အဲဒီ နိုင်ငံ တွေ မှာ ဘယ် လို လုပ် သလဲ ဆို တာ မေးကြည့်
ပါဦး ၊ သတင်းစာ ထဲ မှာတော့ ၊ အင်ဖရာ စထြပ်ချာ ၊ ဘက်ဘုံး ၊ ဖိုင်ဘာအော့တစ် တွေ ၊ နေရှင်နယ်
နက်ဝပ်ခ် တွေ စတေရှင် တာဝါ တွေ အများကြီး ထောင် ရ လို့ ဗမာပြည် က ဈေးကြီး နေ တယ်
ဖတ်ရ ပါ တယ် ၊ ဟို နိုင်ငံ တွေ မှာ လဲ တိုင် တွေ အများကြီး ထောင် ထား တာ တွေ့ ခဲ့ ပါတယ်။
ကြိုး တို့ ဘာ တို့ လဲ ၊ဗမာပြည် မှာ လို ဘဲ ဖိုင်ဘာကြိုး သုံး ပါ သတဲ့ ၊ အပ် ချည်ကြိုး ကို တော့
ဘယ် နိုင်ငံ က မှ မသုံး ပါဘူး ထင် ပါ တယ် ၊ နား တော့ မလည် ပါဘူး ၊ တွေ့ ခဲ့ ကို တာ ပြော ပြ တာပါ
သေချာ တာ က တော့ ၊ ဗမာ ပြည် ထဲ က ရှိ သမျှ ငတုံး တွေ အကုန် စု ထား ပြီး အလုပ် လုပ် နေ
တာ က မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေး လုပ်ငန်း ဖြစ် မယ် ထင် ပါ တယ် ၊ တယောက် ၂ ယောက် တုံး ယုံ
လောက် နဲ့ တော့ အခြေအနေ ဒီ လောက် မ ဆိုး နိုင် ပါ ဘူး ခင် ဗျာ။ ဘေး ဘီ နိုင် ငံ တွေ ကို
နဲနဲ ပါး ပါး လဲ တီးခေါက် လေ့ လာ ကြည့် ကြ ပါ ဦး ခင် ဗျာ။
အာဆီယံ နိုင်ငံ တွေ ထဲ မှာ တော့ စီ အယ်လ် အမ် ဗွီ ဆို ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်း တဲ့ လေး နိုင်ငံ ၊
ကမ်ဘောဒီးယား ၊ လာအို ၊ မြန်မာ ၊ ဗီယက်နမ် ဆို ပြီး သတ်မှတ်ထား ပါတယ် ၊ ဗီယက်နမ် က တော့
ဆရာကြီး နိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့ မှာကြောင့် ဒီ စာရင်း ထဲ က ထွက် ပါ တော့ မယ် ၊ ကျန် ခဲ့ တဲ့
၃ နိုင်ငံ မှာ မြန်မာ က တခြား ၂ နိုင်ငံ ကို ရင်ဘောင် မတန်း နိုင် တော့ ဘူး လား ခင် ဗျာ။
ဗနာက် ကျ နေ ပါ ဘီ၊ နောက် ကျ တာ ကို ဘယ် လောက် ဝေး ဝေး မှာ ၊ တယောက် ထဲ ဘိတ် ဖြစ်
နေ တယ် ဆိုတာ ကို သဘော ပေါက် ဘို့ လို ပါ တယ် ခင် ဗျာ။
မြန်မာ ပြည် မှာ ၊ ဘယ် သူ တွေ က ၊ ဘာ တွေ ကို ဘယ် လို ပြောင်း ပြောင်း
အများပြည်သူ အတွက် အကောင်း တ က အကောင်း ဆုံး တွေ သာ ရ နိုင် တွေ့ နိုင် ဖြစ် ပ စေ ပ ဗျား ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:20 AM No comments:
ယုံကြည်မှုကွန်ယက် မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်ဆီသို့
လူသားချင်း စာနာစိတ်ဖြင့် လွတ်လပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ကို လိုလားကြသော လူမှုရေးသမားများ သည် စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ပန်းချီ အစရှိသည့် အနုပညာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပေါ်ထွန်းလာသော၊ ပြည်သူ လူထုအတွင်းမှ မွေးဖွားလာသော ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြသည့် လူသားများဖြစ်ကြသည်။ မိမိတို့၏ နယ်ပယ်အ သီးသီးမှ အများအကျိုးသယ်ပိုး ထမ်းရွက်ပေးဆပ်ကြသူအချင်းချင်း လက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြကာ မိမိတို့ လိုလားသော ငြိမ်းချမ်းရေး အပြည့်အဝရရှိ၍ သာယာဝပြောသော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ အတ္တများဖြုတ်ကာ လျှောက်လှမ်းကြရန်အတွက် အရေးကြီးလှသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ဖြင့် အချင်းချင်းလက်တွဲ မဖြုတ် ဦးတည်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်သို့ ချီတက်ကြခြင်းကို လူမှုကွန်ယက်ဟုလည်း သတ်မှတ် နိုင်သည်။
လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သော “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်” မှ ဦးရဲလွင်၊ ကိုသားထွေးတို့ ကွန်ယက်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်များမှ ခြေလှမ်းစကာ အထက်မြန်မာပြည်မြို့အနှံ့နီးပါး ကိုယ်ကျိုးစွန့်၍ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသော ဂီတပညာရပ်ဖြင့် အခက်အခဲ အဟန့်အတားများကြားမှ သွားရောက်ဖျော်ဖြေကာ ရရှိလာသော အလှူငွေများအား ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု ၍ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ဖန် ရခိုင်ပြည်နယ် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကြောင့် အိုးအိမ်များပျက်စီးခြင်း၊ မိသားစုများ သေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများကို လူသား ချင်း စာနာစိတ်ဖြင့် ကူညီပံ့ပိုး လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် ဖြူးမြို့၊ မိတ္ထီလာမြို့များသို့ သွားရောက်၍ သီဆိုဖျော် ဖြေကာ ရရှိလာသော အလှူငွေများအား လူမှုရေးလုပ်ငန်းများသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပေးဆပ်နေ သော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်အပ်နှံလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အပ်နှံခဲ့သော အလှူ ငွေများအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပခုံးလွှဲကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
၉.၇.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်”မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် လာရောက်လှူ ဒါန်းမှုကို ပြုလုပ်ရာတွင် “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်” ဖြစ်ပေါ်လာပုံအား ဦးအောင်သန်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးရဲလွင်မှ ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေ လှူဒါန်းရခြင်း အကြောင်း ပြောကြားရာတွင် “မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းသော ဂီတသံစဉ်များဖြင့် ရှာဖွေထားသော အလှူငွေ များအား ဦးကျော်သူနှင့် တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဦးကျော်သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ပေးဆပ်မှု များကို ယုံကြည်စိတ်ချ၍၄င်း၊ ဦးကျော်သူတို့ထံ ဤအလှူငွေများအား လှူဒါန်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ကာ အလှူငွေကျပ် ၁၈၅၆ဝဝဝဝိ/- (တစ်ရာရှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းခြောက် သောင်း)ကျပ်၊ US$ - 118 နှင့် S$ - 50 တို့အား လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားအား ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောရာတွင် “လောကကြီးတွင် စည်း ဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း၊ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆို စည်းဖောက်၍ မရ ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံ၏စည်းကို ဖောက်ဖျက်ခံရခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုများ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်သူလူထုတို့အတွက် ယခုလို လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်”မှ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရှာဖွေခဲ့သော အလှူငွေများအား မိမိတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အနေဖြင့် စည်းစနစ်ကျစွာဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်း ရခိုင်ဒေသရှိ ပြည်သူဒုက္ခသည်များထံသို့ အရောက်ပို့ပေးမည်ဟု ဂတိပေးကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်မှ ဦးရဲလွင်၊ ကိုသားထွေး၊ ကောင်းပြည့်၊ တိုးလွင် (ဥတ္တရအလင်း)၊ E ချို၊ ကိုထွဋ်၊ ကိုတင်အုန်း၊ ညီညီလွင်၊ ဖိုးစံ တို့မှ တီးခတ်ဖျော်ဖြေ သီဆိုခဲ့ပြီး ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေမှ တီးဝိုင်းသံစဉ်နှင့်အတူ “မိတ္ထီလာ” အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ်အား ရွတ်ဖတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက် ဖျော်ဖြေမှုအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် မိမိတို့အနေဖြင့် နေ့တဓူဝ သောကအပူများဖြင့်သာ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ စိတ်၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်သော ဂီတ သံစဉ်များကို မထင်မှတ်ပဲ နားစဉ်ခဲ့ရ၍ လူမှုရေးခွန်အားများ တိုးတက်လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များ၊ မီဒီယာများနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသား/ သူများအား ကော်ဖီ၊ မုန့်များဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကာ ပြည်တွင်း/ပ မီဒီယာများတို့မှ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားကြပြီးသည့်နောက် အခမ်းအနားအား ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီး၊ ထောင့်အသီးသီးတို့မှ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအား ကိုယ်ကျိုးမဖက် ထမ်းရွက်ပေးနေကြသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် သွေးစည်းညီညွတ်ကာ တစ်ခုတည်းသော ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ဆီသို့ အင်တိုက်အားတိုက် လက်တွဲမဖြုတ် ကွန်ယက်တစ်ဖွယ် ချီတက်ကြရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
U Kyaw Thu
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:06 AM No comments:
ဦးမောင်အေး (ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ငြိမ်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) ဦးနှောက်သွေးကြော ရောဂါကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေ
ဦးမောင်အေး (ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ငြိမ်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) သည် ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ဦးမောင်အေးသည် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တပ်မတော်...စစ်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရပြီး ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့) တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Mount Elizabeth ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူဖွယ် ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ဦးမောင်အေးသည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး DSA အပတ်စဉ် (၁) ဆင်းဖြစ်ကာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ တပ်မတော်တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရာထူးမှ အနားယူသည်အထိ တပ်မတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၅၆ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
"Myanmar's number two general in former junta suffers stroke"
Updated: 6h 49m ago.
Vice-Senior General Maung Aye, who rose to be deputy chairman of the State Peace and Development Council, was admitted to hospital in Naypyitaw.
"He is sick and will go to Singapore for treatment," said Htay Oo, general secretary of ruling Union Solidarity and Development Party (USDP). "His condition is not that serious," he added.
The USDP is the political arm of the military establishment, which ruled the country through various regimes from 1962.
Myanmar has been under nominal civilian rule since the pro-military USDP came to power after winningageneral election in November 2010.//DPA
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:49 AM No comments:
သတင်း — July 9, 2012
ပျက်စီးနေသော ငလကျွန်း- ဂုံးရှိန်လမ်းအတွက် ပြုပြင်ရန် အတွက် ဒေ၀ူး ကိုးရီးယား ကုမ္ပ္ပဏီမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ထုတ်ပေးထားကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ဒေသ အာဏာပိုင်များက လမ်းကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခြင်း မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် ဒေသခံများ အကြားတွင် အထူးမကျေနပ်မူ တိုးပွားနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:34 AM No comments:
(ဇူလိုင်၉) ကျင်းပသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(ရုပ်သံ)
ဒီလွှတ်တော်မှာ ပြုပြင်ရမှာတွေ ဟောဒီလောက်အများကြီးရှိတယ်...
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:30 AM No comments:
ဦးမောင်အေး (ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ြ...
(ဇူလိုင်၉) ကျင်းပသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်...